Adeegyada nafaqada - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Isbedelada Muhiimka ah ee Goobaha Xulista Xirmooyinka Cunnada iyo Waqtiyada
Ha iloobin inaad wajiga xirto markii aad cuntada qaadaneysid.
Qoysaska carruurta leh ee ka diiwaangashan waxbarashada fog iyagoo u maraya Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale ayaa weli awood u leh inay helaan cunnooyinka. Cuntada waxaa lagu bixiyaa amar ahaan bit.ly/enrolledrdalemealorders . Qoysasku waxay u baahan yihiin inay isdiiwaangeliyaan toddobaadle oo amarada usbuuca soo socda waxaa la siinayaa Jimcaha illaa 7 fiidnimo Su'aalaha? Fadlan email noogu soo dir nutritionservices@rdale.org ama naga soo wac 763-504-8049.
Arbaco 6:30 ilaa 7:30 am; 10 subaxnimo ilaa duhur Dugsiga Sare ee Cooper
47th Avenue Waqooyiga
Rajo Cusub, MN 55428 Albaabka weyn
Arbaco 10 subaxnimo ilaa duhur
Laga bilaabo Arbacada, Abriil 7th,
xirmooyinka cuntada waxaa lagu heli doonaa iyadoo loo dalbado si amar ah
Arbacada 10 am ilaa 12 pm Dugsiga Dhexe ee Plymouth
10011 36th Avenue Waqooyiga
Plymouth, MN 55441 Albaabka weyn
Arbacada 10 am ilaa 12 pm
3730 Toledo Avenue North
ugu dhow Regent Ave.
Quraacda iyo qadada qadada cunnada ayaa isbadalaysa
Maaddaama aan u wareejineyno diiradda si aan u siino cunnooyin inta lagu jiro maalinta iskuulka, mar dambe awood uma yeelan doonno inaan u adeegno cunnooyinka bulshada weyn laga bilaabo Isniinta, Maarso 15. Runtii ma qiyaasi karno sida sanadkii la soo dhaafay u qabsoomay laakiin waxaan u mahadcelineynaa bulshada ku taageeraya dadaalkeena. Waxay ahayd farxaddeena runta ah ee u adeegida iyo barashada qoysas badan.
Xirmooyinka cuntada ee loogu talagalay Dugsiyada Aagga Robbinsdale ee laga diiwaangeliyey ardayda barta masaafada
Xirmooyinka cuntada ee bartayaashayada fogfog ayaa la heli doonaa iyadoo la isdiiwaangeliyo Arbacada 10 am ilaa duhurnimo ee Dugsiga Sare ee Cooper laga bilaabo toddobaadka Maarso 15 .
Laga bilaabo Arbacada, Abriil 7, Dugsiga Dhexe ee Plymouth iyo Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale ayaa lagu dari doonaa sidii goobo cunto laga soo qaado. Cuntada waxaa lagu bixiyaa amar ahaan bit.ly/enrolledrdalemealorders . Qoysasku waxay u baahan yihiin inay isdiiwaangeliyaan toddobaadle waxayna amarada usbuuca soo socda ku eg yihiin Jimcaha illaa 7 fiidnimo
Su'aalo? Fadlan email noogu soo dir nutritionservices@rdale.org ama naga soo wac 763-504-8049.
Liistada waxaa laga heli karaa internetka rdale.nutrislice.com . Wixii macluumaad ah ee ku saabsan sida loo kululeeyo loona diyaariyo waxyaabaha ku jira xirmada cuntadaada, madax u noqo bit.ly/RdaleHeatingInfo .
Codso maanta bilaash iyo raashin dhimis (Faa'iidooyinka waxbarasho)
Ardayda u-qalma cuntada bilaashka ah ama qiimo jaban waxay heli doonaan quraac BILAASH ah iyo Qado BILAASH ah, oo ay weheliso helitaanka qiimo dhimis ah khidmadaha dugsiga qaarkood iyo sidoo kale xiisadaha Waxbarashada Beesha. Codsiyada waa in la buuxiyaa sanad dugsiyeed kasta si loogu qalmo; codsiyada waa la buuxin karaa wakhti kasta inta lagu jiro sanad dugsiyeedka.
Codsiga khadka tooska ah
Waxaad sidoo kale ka codsan kartaa codsi warqad dugsi kasta ama Xarunta Adeegga Waxbarashada ee 4148 Winntekta Avenue North ee New Hope.
Cunto u soo qaado Barashada Fogaanta
Cunnooyinka Ardayda - Qofka Wax Ubaranaaya
Tier 1 Xannaanada carruurta
Laga bilaabo usbuuca 15-ka Maarso, xirmooyinka cuntada waxaa laga heli karaa si loogu soo qaado Dugsiga Sare ee Cooper Arbacada 10 am ilaa duhurkii. Xirmooyinka cunnada waxaa heli doona oo keliya ardayda barteyaasha ka diiwaangashan Rdale.
Laga bilaabo usbuuca Abriil 6, Dugsiga Dhexe ee Plymouth iyo Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale ayaa lagu dari doonaa goobo soo qaadis dheeraad ah.
Laga bilaabo Maarso 15, cunnooyinka waxaa heli kara oo keliya ardayda wax ka barata masaafada ee ka diiwaangashan Dugsiyada Aagga Robbinsdale. Ma awoodno inaan u adeegno bulsho weynta maadaama aan ugu adeegno ardayda iskuulka dhexdiisa.
Cuntada waxaa lagu bixiyaa amar ahaan bit.ly/enrolledrdalemealorders . Qoysasku waxay u baahan yihiin inay isdiiwaangeliyaan toddobaadle waxayna amarada usbuuca soo socda ku eg yihiin Jimcaha illaa 7 fiidnimo
Ka mahadcelinta ka dhaafida USDA, waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah waxay awoodaan inay soo qaataan cunto iyaga oo aan caruurtoodu joogin. Caruurta, waalidiinta, dadka ardayda masuulka ka ah, iyo walaalaha waxay soo qaadan karaan hal xirmo cunno cunug walba, usbuucii.
Qoysasku waxay kaliya ka heli karaan cuntooyinka hal goob usbuucii.
Maxaa laga filan karaa?
Ardayda imaan doonta goobta waxay heli doonaan quraac iyo qado bilaash ah inta ka harsan sanad dugsiyeedka. Taasi waxay ka dhigan tahay DHAMMAAN ardayda waxay awoodi doonaan inay ka soo qaataan Grab & Go quraac ama quraac makhaayadda iyada oo aan wax kharash ah ku bixin maadaama ay aroortii imaanayaan dugsiga. Dhammaan ardayda waxay sidoo kale heli doonaan qado bilaash ah maalin kasta.
Sidee cuntadu u ekaan doonaan?
Ardaydu waxay sugi karaan waxyaabaha ugu caansan iyo sidoo kale miro faro badan, khudradda, miraha oo dhan, iyo caano Waxaad ka daawan kartaa menus https://rdale.nutrislice.com/menu .
Weli ma soo qaadan karaa xirmooyinka cuntada haddii ardaygaygu ku soo laabto dugsiga?
Haddii aad haysatid arday quraac iyo qado nala cuni doona dugsiga, nasiib-darro awood uma lihin inaan ku siino xirmooyin cunno ah oo laga soo qaado goobaha lagu qaybinayo iyadoo loo raacayo tilmaamaha USDA.
Ka waran haddii ardaygaygu ku sugan yahay dugsiga qaab isku dhafan?
Ardaydu waxay heli doonaan ikhtiyaar ay ku qaataan xirmo cunno 3-maalin ah gurigooda iyaga oo la jooga wax kasta oo maalinta ugu dambeysa ee dugsigoodu yahay toddobaadka.
Ka waran haddii ardaygaygu ku haro waxbarashada fog?
Weli waad awoodi doontaa inaad soo qaadato xirmooyinka cuntada. Fadlan eeg macluumaadka kore.
Ha ka waaban inaad noosoo dirto emayl naadiyada oo ah nutritionervices@rdale.org AMA ka wac 763-504-8049.
Cunnooyinka ardayda ka diiwaangashan xanaanada cunugga waxaa bixin doona goobta ay ka shaqeeyaan shaqaalaha jikada waana bilaash ardayda dhigata.
Carruurta ku jirta xanaanada cunugga ma awoodaan inay ka soo qaataan xirmooyinka cuntada goobaha lagu qeybinayo.
Menus waxay la kulmi doontaa tilmaamaha Barnaamijka Adeegga Cuntada Xagaaga ee qaybaha cuntada. Liisaska, macluumaadka waxyaabaha ka kooban iyo tilmaamaha diyaarinta cuntada waxaa lagu dhajin doonaa rdale.nutrislice.com .
Laga bilaabo usbuuca 15-ka Maarso, xirmooyinka raashinka la soo qaado waxaa lagu qori doonaa oo keliya ardayda barta masaafada ee ka diiwaangashan Dugsiyada Aagga Robbinsdale.
Adeegyada nafaqadu waxay awoodaan inay bixiyaan bedel macquul ah baahiyaha nafaqada ee khaaska ah kaliya marka foomka gaarka ah ee cuntada ay buuxiyeen dhakhtar shati haysta, caawiye dhakhtar, ama kalkaaliye caafimaad oo diiwaangashan, sida kalkaaliye caafimaad oo sharciyeysan. Foomkan waa in lagu soo celiyaa Brie Smith, Kaaliyaha Agaasimaha Adeegyada Nafaqada ee Brianna_Smith@rdale.or g. Marka la oggolaado, cuntooyinka gaarka ah waxay u baahan doonaan in horay loo sii dalbado si loo hubiyo in jikadeena ay ku jiraan cunnooyinka gacanta.
Dugsiyada Robbinsdale Area, cuntooyinku waa kuwo caafimaad qaba oo isku dheelitiran, oo ardayda siinaya nafaqada ay ugu baahan yihiin inay ku guuleystaan dugsiga.
Kusoo Biir Wargeyskeena elektaroonigga ah
Hesho xiriir waqtiyeysan oo laxiriira isbeddelada ku yimaada goobaha cuntada lagu qaybiyo, menusyada billaha ah, iyo habka cuntada ee xilliyeed. Wargeyskan waxaa loogu talagalay qoysaska Dugsiyada Aagga Robbinsdale, ardayda, iyo xubnaha bulshada.
Katie M. Wahl
Quraac iyo Qado Qado
Qiimaha Cunnada Sannad Dugsiyeedka 2020-21
Barnaamijka Khudradda iyo Khudradda Cusub
Macluumaadka Bixinta Xisaabta Cuntada (PayPams)
Bayaanka U hogaansanaanta USDA
Codsiyada Cunto Gaarka ah
Adeegyada Nafaqada ee Robbinsdale waxay iskaashi la sameysay Nutrislice si ay ula wadaagto liiska ardayda iskuulada qaab cusub. Adoo adeegsanaya websaydhka Nutrislice, waxaad si fudud u daawan kartaa liiska cuntada ee quraacda iyo qadada maalin kasta, oo ay la socdaan sharaxaad iyo macluumaadka nafaqada ee shay kasta.
Eeg Liiska Dugsiyadaada
Macluumaadkan sidoo kale waxaa laga heli karaa barnaamijka moobiilka si dadka isticmaala ay u helaan macluumaadka markay u baahan yihiin, halka ay uga baahan yihiin.
barnaamijka loogu talagalay Android
barnaamijka loogu talagalay iPhone
Cunnooyinka iskuulku waa qiime weyn iyo u roonaanta qoysaska mashquulka ah, sidoo kale! Qiimaha hadda ee sanad dugsiyeedka 2020-21 waa:
Quraac: $ 0
Qadada: $ 0
Bilaash / Dhimis: $ 0
Dugsiga Dhexe (oo ay ku jiraan FAIR School Crystal)
Barnaamijka Fresh Fruit iyo Khudaarta ( FFVP ) ee sanad dugsiyeedka 2020-21 waxaa laga heli karaa Lakeview, Meadow Lake, Neill, Noble, Northport, Sandburg, Forest iyo FAIR School Crystal. FFVP waxay siisaa dhammaan carruurta dhigata iskuulada kaqeyb qaadanaya noocyo kala duwan oo miro iyo khudrad bilaash ah maalintii oo dhan.
Ujeedada FFVP waa in la abuuro jawi iskuul caafimaad leh iyadoo la siinayo ikhtiyaarro cunto caafimaad leh, la ballaariyo noocyada kala duwan ee miraha iyo khudradda carruurta, kordhinta cunnooyinka miraha iyo khudradda carruurta iyo is-beddel lagu sameeyo cunnooyinka carruurta si ay saameyn ugu yeeshaan caafimaadkooda hadda iyo mustaqbalka.
Cuntooyinka iskuulku waxay ku jiraan nidaam lacag-bixin ah; lacag kaash ah lama aqbalo. Ardayda waxay u baahan doonaan lacag akoonadooda loogu talagalay cuntada, caanaha iyo gadashada ala carte. Lacag bixinta waxaa lagu sameyn karaa mid ka mid ah qaababka soo socda:
Lacag ama jeeg
U soo dir jeeg ama lacag caddaan ah xafiiska ama xafiiska degmada adigoo ku ridaya baqshad. Fadlan ku qor magaca iyo fasalka ardayga baqshadda
Kudar lacagaha khadka tooska ah ama taleefoonka adigoo adeegsanaya PayPams, nidaamka maareynta koontadayada. Fadlan ogow, waxaa jira 4.6% lacag macaamil lacag ah. Lacag bixinta waxaa laga sameyn karaa koontadaada hubinta, PayPal, kaarka amaahda Master ama Discover kaarka deynta.
U samee biilka lacag bixinta xarunta bangigaaga oo u qoondee 'Robbinsdale Child Nutrition' sidii lacag bixiye. Ku dar magaca ardaydaada qeybta xusuusta.
Wixii macluumaad dheeraad ah ama caawimaad ah ee ku saabsan ikhtiyaarrada lacag-bixinta, fadlan wac waaxda Adeegyada Nafaqada 763-504-8050.
Si aad u aragto macluumaadka koontada cuntada ee ardaygaaga, qoysaska waxay ka geli karaan PayPams khadka tooska ah. Waxaad arki kartaa dheelitirka ardayda; dejiso ogeysiisyada emaylka hooseeya; fiiri taariikhda lacag bixinta (lacagaha lagu bixiyo nidaamka); oo arag daawooyinka maalinlaha ah ee wax laga iibsado.
PayPams login ama isdiiwaangali
Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg Nidaamka Maamulka Degmada 534AP (sidoo kale waxaa lagu heli karaa Isbaanish).
Cunnooyinka iskuulku waxay ardayda siiyaan caano, khudrad iyo khudrad, borotiinno iyo badar, waana inay la kulmaan xaddidyo adag oo ku saabsan dufanka buuxa iyo cabbirka qaybtiisa. Qadada iskuulku waxay la kulantaa heerarka u baahan:
Xadid kalooriyeyaasha da'da ku habboon
Cunto khudaarta ka weyn, oo ay ku jiraan cagaar madow, khudaar casaan / liin ah iyo digiraha
Aan dufan lahayn ama 1% caano
Sodium ka yar
Waan ognahay sida ay muhiimka u tahay in ardayda lagu dhiirrigeliyo inay cunaan ikhtiyaarrada caafimaadka leh. Waxaan had iyo jeer ka shaqeyneynaa inaan ardaydayaga u soo bandhigno doorashooyin dhadhan fiican leh iyo kuwa caafimaad qaba. Waxaan ka shaqeyneynay qaar ka mid ah cuntooyinka cusub ee la xoqay oo la hagaajiyay sanadkii la soo dhaafay. Waxaan martigelinaa imtixaannada dhadhanka ardayda si aan toos uga helno jawaab celinta ardayda oo aan uga qaybgalno hannaanka qorshaynta liiska. Salad soo galid maalinle ah ayaa lagu sii wadi doonaa in lagu bixiyo iskuulada guushooda awgeed. Shaqaalaheena nafaqada ee iskuulku waxay heleen habab aad u wanaagsan oo ardayda looga farxin karo xulashooyinka cuntada caafimaadka leh waxaanan sii wadi doonaa ka shaqeynta xalalka hal abuurka ah si loo hubiyo in cunnooyinka caafimaadka qaba ay soo jiitaan ardayda.
Iyadoo la raacayo sharciga xuquuqda madaniga federaalka iyo Waaxda Beeraha Mareykanka (USDA) xeerarka iyo siyaasadaha xuquuqda madaniga, USDA, Hay'adeeda, xafiisyadeeda, iyo shaqaalaheeda, iyo hay'adaha ka qeyb qaadanaya ama maamulaya barnaamijyada USDA waa ka mamnuuc takoorid ku saleysan midab, midab, asal qaran, jinsi, naafonimo, da ', ama aargudasho ama aargoosi waxqabadyada xuquuqda madaniga ah ee hore barnaamij kasta ama hawl kasta oo ay qabato ama maalgaliso USDA.
Dadka naafada ah ee u baahan qaabab kale oo lagu wada xiriiro ee loogu talagalay macluumaadka barnaamijka (tusaale ahaan farta indhoolayaasha, daabacaad weyn, cajalad maqal ah, Luqadda Dhagoolayaasha Mareykanka, iwm.), Waa inay la xiriiraan Hay'adda (Gobol ama maxalli) meesha ay ka codsadeen dheefaha. Shaqsiyaadka dhagaha la ', ama maqalka culus ama naafada ka ah hadalka waxay la xiriiri karaan USDA iyaga oo u maraya Adeegga gudbinta ee Federaalka (800) 877-8339. Intaa waxaa sii dheer, macluumaadka barnaamijka waxaa lagu heli karaa luuqado aan ahayn Ingiriis.
Si aad u gudbiso cabashada barnaamijka takoorka, buuxi Foomka Cabashada Takoorka Barnaamijka USDA, (AD-3027) oo laga helo internetka: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html , iyo xafiis kasta oo USDA ah, ama qor warqad ku socota USDA kuna qor warqada dhamaan macluumaadka lagu codsaday foomka. Si aad u codsato nuqul ka mid ah foomka cabashada, wac (866) 632-9992. U gudbi foomkaaga oo dhameystiran ama warqad USDA adigoo:
(1) boosto: Waaxda Beeraha Mareykanka
Xafiiska Kaaliyaha Xoghayaha Xuquuqda Madaniga
(2) fakiska: (202) 690-7442; ama
(3) emayl: program.intake@usda.gov
Qoysaska leh ardayda leh baahiyo cunto oo gaar ah waa inay la xiriiraan kalkaaliyaha caafimaadka ee dugsiga iyo Maamulaha Adeegyada Nafaqada ee dugsigooda. Guryo ayaa la sameyn doonaa markasta oo ay suurtagal tahay. Intaa waxaa sii dheer, Adeegyada Nafaqada ee Robbinsdale waxay u sameysaa beddelaad macquul ah cuntada iyadoo loo eegayo xaalad-kiis-kiis ardayda loo arko inay qabaan naafonimo xaddidaya cunnadooda.
Marka loo eego Sharciga Naafada Mareykanka (ADA), inta badan naafonimada jireed iyo maskaxeed waxay noqon doonaan naafonimo. Sharciga Waxka Beddelka ADA ee 2008 wuxuu isbedel muhiim ah ku sameeyay ereyga naafonimada si loogu daro qof kasta oo qaba naafonimo jireed ama maskaxeed taasoo si weyn u xadideysa hal ama in ka badan oo ah howlaha nolosha, oo ay ku jiraan shaqooyinka waaweyn ee jirka. Hawlaha ugu muhiimsan ee jirka waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn: howlaha habdhiska difaaca jirka, dheefshiidka, mindhicirka, kaadi haysta, neerfaha, maskaxda, neefsashada, wareegga dhiigga, endocrine iyo taranka.
Adeegyada Nafaqada ee Robbinsdale looma baahna inay la timaado codsiyada cuntada gaarka ah ee aan ka koobnayn naafonimo, oo ay ku jiraan codsiyada la xiriira xukunada diinta ama akhlaaqda ama doorbid shaqsiyeed.
Si aad u codsato cunno gaar ah ardaygaaga, Foomka Codsiga Cunnada Gaarka ah waa inuu buuxiyaa takhtar shatiyeysan, kaaliye dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad oo sharciyeysan. Haddii aad weydiisaneysid in cuntada lagaa reebo oo la beddelo, fadlan hubi in lambarrada 1, 2 iyo 3 ay dhammaystiran yihiin ama ma aqbali karno foomka.
U dir ama u dir foomamka la dhammaystiray Xarunta Adeegga Waxbarashada, Attn: Brie Smith, 4148 Winnetka Ave. N, New Hope, MN 55427. Foomamka sidoo kale waxaa fakis loogu diri karaa 763-504-8971, Attn: Brie Smith.
Foomka Codsiga Cunto Gaarka ah
MN State Statute 124D.114 waxay ubaahantahay iskuulada inay siiyaan mid ka mid ah bedelaadaas ardeyga laaqir la'aanta laaktooska hadii waalidku codsado badal ahaan, qoraal ahaan:
Caano-yaraanta "Laktose", caanaha laktoosi la'aanta ah ama kullanka tilmaamaha gaarka ah ee caanaha soya
Caano lagu xoojiyey lactase-ka dareeraha, kiniiniga, granular, ama qaab kale
Caano lactobacillus acidophilus lagu daray
Casiirka ama biyaha ma beddeli karaan caano ku jira Barnaamijka Qado ee Dugsiyada Qaranka.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan eeg Waaxda Waxbarashada ee Minnesota ee website . Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan wac Kaaliyaha Adeegyada Nafaqada, Brie Smith, lambarka 763-504-8048.
Ardayda aan u dulqaadan karin Laktose
Caano naaqus ah caano lagu xoojiyey lactase oo dareere ah, kiniin ah, granules ama qaab kale; ama caano ay ku darsadeen lactabacillus acidophilus waa in la siiyaa ardayda laaktoos-u dulqaadan waaya markay qoraal ka codsadaan waalid ama ilaaliye.
Kheyraadka Cuntada Bulshada
Fadlan ka hubi taariikhaha / waqtiyada adeegga iyo goobaha urur kasta ee hoos ku taxan si loo xaqiijiyo saxnaanta macluumaadka ku qoran.
Bangiyada Cuntada iyo Kheyraadka Cuntada
Raadi bangiga cuntada ee kuugu dhow
GOOBTA Cuntada U Dhow
Waxay u adeegtaa dadka deggan Northern Robbinsdale, Crystal, iyo New Hope
5209 W. Broadway Ave., Crystal, MN 55429
Hoyga cuntada iyo u diritaanka
Malaha Xarun Cuntada Hassles loogu talagalay Dhallinyarada
Kaniisadda iskutallaabta ee Lutheran
5929 Brooklyn Blvd. Xarunta Brooklyn, MN 55429
Furan Arbacada 3:00 pm ilaa 6:00 pm
Kaydka Cuntada Dhalinyarada ee da'doodu tahay 12- 21
Waxay u adeegtaa dadka deggan Golden Valley, Crystal, New Hope, Robbinsdale, Plymouth
730 Florida Ave. S., Golden Valley, MN 55426
Khaanadda cuntada, dharka iyo alaabada guriga, kaalmada maaliyadeed, naadiga shaqada
WIC: Haweenka, Dhallaanka iyo Carruurta
Goobo Kala Duwan
Waxay siisaa deeq raashin dheeri ah qoysaska u qalma ee haysta carruur yaryar ama dhallaanka
Waqtigaan la joogo, waxaan kaliya u qaybinaynaa dadka deggan degellada wada-hawlgalayaasha ah. Haddii aad u baahan tahay agab cunto oo dheeri ah, fadlan ka wac Khadka Caawimaadda Cuntada ee Minnesota 1-888-711-1151, Isniinta-Jimcaha laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo ama booqo www.hungersolutions.org
Rajada Cusub YMCA
7601 42nd Avenue North New Hope, MN 55427
Qoysasku waxay ka qaadan karaan cuntada duhurkii - 1-da duhurnimo Isniinta ilaa Jimcaha. Qoysasku waxay dooran karaan xirmo cunno qoys afar ka kooban oo ay ku jiraan borotiin, khudrad iyo cunto kale oo cusub. Sidoo kale, boorsooyinka qadada leh sandwich, cunto fudud iyo miro ayaa la heli karaa.
www.fareforall.org ama 763-450-3880
Xirmooyinka tayada, jaban ee raashinka, oo ay ku jiraan hilibka iyo wax soo saarka. Bakhaarka bakhaarka ee New Hope (8501 54th Ave N) wuxuu furan yahay Isniinta kasta oo Isniinta laga bilaabo 9:30 am-7:00 pm, aqbal lacag, deyn, debit, kaararka EBT. U furan qof walba (Looma baahna dakhli)
XALADA GAAJADA / MAGAALADA MINNESOTA CUNTO
www.hungersolutions.org ama 1-888-711-1151 ama 651-486-9860
Saacadaha Khadadka Caawinta: Isniinta-Jimcaha 8:30 subaxnimo-4:30 galabnimo
www.ceap.org ama 763-566-9600
Waxay bixisaa taageero cunno, dhar iyo u gudbin macluumaad. Wac ama hubi bogga saacado badan. Waxay u adeegtaa dadka degan Brooklyn Center, Brooklyn Park, East Champlin (Bariga Hwy 169)
SNAP (Barnaamijka Kaalmada Nafaqada Dheeraadka ah)
Waxay ka caawisaa reer Minnesota dakhligoodu hooseeyo inay helaan cuntada ay ugu baahan yihiin nafaqo iyo cunto isku dheeli tiran. Barnaamijku wuxuu bixiyaa taageero ka caawisa fidinta miisaaniyada cuntada gurigaaga. Shuruudaha dakhliga ayaa khuseeya.
Telefoonka gacanta ee loogu talagalay helitaanka cuntada inta lagu jiro xirnaanshaha iskuulka
Cunnooyinka Bilaashka ah ee Carruurta Telefoonka gacanta ( Apple ) ( Android ) ayaa ka caawin doona carruurta iyo qoysaska u baahan helitaanka iyo helitaanka cunnooyin bilaash ah boqolaal dugsi iyo goobo kale oo ku yaal Minnesota oo dhan.
Kibis & Kaluunka
CACFP Diseembar 2020
CACFP Janaayo 2021
CACFP Febraayo 2021
CACFP Maarso 2021
Cunnooyinka qolka qadada ee aad ku sameyn karto guriga
Talaado, Dec. 1: Wax ka baro nafaqada! Aan akhriyo oo wax ka barto waxa MyPlate yahay!
Arbaco, Dec. 2: Wax ka baro nafaqada! Daawo Kooxda Cuntada ee Caanka ah 5 oo wax ka baro waxa uu yahay MyPlate!
Khamiis, Dec. 3: Aan Guurno! Sidee ku saabsan leylis 9 daqiiqo ah oo guriga ka socda maanta?
Jimcaha Dec. 4: Wax ka baro Dunida! Aynu booqanno Faransiiska oo aan aragno macmacaankooda, caanka caanka ah ee Eiffel Tower, iyo Webiga Webiga!
Isniinta, Dec. 7: Aynu Baranno Sayniska! Baro sida loo sameeyo kartoonada oo aan sameysano kartoon u gaar ah!
Talaado, Dec. 8: Wax ka baro nafaqada! Aan midabeyno oo aan qurxino MyPlate-kayga gaarka ah !
Arbaco Dec. 9: Wax ka baro Dunida! Ma rabtaa inaad ogaato sida loo aado booska? Aan aadno NASA oo aan ogaano!
Khamiista, Dec. 10: Aynu Wada Heesno! Ma u xiisay xagaaga? Hees la raac Olaf, barafka, " Xagaaga !"
Jimco, Dec. 11: Aan Guurno! Aynu Ku Dhaqmeyno inaan ka shaqeyno 7 daqiiqo oo dhaqdhaqaaq xayawaan ah !
Isniinta, Dec. 14: Wax ka baro nafaqada! Ma taqaan farqiga u dhexeeya miraha iyo khudradda? Daawo fiidiyowgaan si aad u ogaato!
Talaado, Dec. 15: Wax ka baro nafaqada! Waqti aad midabaynayso midhahaaga ! Waxay umuuqan doontaa mid aad ufiican oo caafimaad qab ah!
Arbaco, Dec. 16: Aan Cilmiga Baro! Ma rabtaa inaad u qorto kaarkaaga fasaxa qoyskaaga oo leh khad sir ah? Waa tan sida loo sameeyo !
Khamiis, Dec. 17: Aan Guurno! Aynu wada kulanno oo aan yeelano xayawaan Yoga ah!
Jimco, Dec. 18: Wax ka baro Dunida! Aan aadno Kanada oo aan fuulno gaariga barafka!
Isniinta, Dec. 21: Aynu Baranno Sayniska! Ma xiiseyneysaa sida farahaaga u egyihiin? Aynu halkan ka ogaanno !
Talaado, Dec. 22: Aan wada heesano! Waa jiilaal! Ma rabtaa inaad dhisto nin baraf wata ? Aynu la heesno Anna!
Arbaco, Dec. 23: Wax ka baro nafaqada! Hayso raadinta eray baashaal leh miraha iyo khudradda ! (Furaha jawaabta halkan ayuu joogaa ).
Khamiista, Dec. 24: Wax ka baro nafaqada! Diyaar ma u tahay ciidaha? Aynu reerka la karno iyadoo la adeegsanayo cunto miro iyo khudrad leh !
Isniinta, Dec. 28: Aan la ciyaareyno Bingo MyPlate Grocery Store Bingo qoyskeena!
Talaado, Dec. 29: Aan Baranno Sayniska! Ma dooneysaa inaad barato sirta si dhaqso ah loo raaco? Daawo fiidiyowgaan oo raadso!
Arbaco, Dec. 30: Aynu Wada Heesno! Waxay ku dhowdahay sanad cusub! U ogolow 2020 inay bilowdo sanad cusub Elsa. Iska daa !
Khamiis, Dec. 31: Aan Guurno! Aynu 10 daqiiqo la shaqeyno Ryan iyo hooyadiis oo guriga ku nabad qaba!
Diisambar Hawlaha Kobcinta CACFP
Isniinta, Janaayo 4: Wax ka baro nafaqada! Ka caawi saaxiibkaa inuu aqoonsado koox kasta oo cunto ah oo u socota MyPlate!
Talaado, Janaayo 5: Wax ka baro Dunida! Aynu booqanno London si aan u ogaanno basaska laba-geesoodka ah, Big Ben iyo London Eye!
Arbaco, Jan. 6: Aan Guurno! Qoob-ka-ciyaarka heesta miraha, "Shake Shake Shake It" oo baro sida loo sameeyo casiir khudrad sidoo kale!
Khamiista, Jan. 7: Aynu Wada Heesno! Waa 2021, waa sanad cusub! Hees la raac Troy iyo Gabrielle "Bilowga Wax Cusub!"
Jimcaha, Jan. 8: Aan Wax Ka Baranno Cilmiga! Wax ka baro Bidaarta Bidaarta leh: sababta loogu yeero bidaarta iyo sababta ay khatarta ugu jiraan!
Isniinta Jan. 11: Wax ka baro nafaqada! Ma rabtaa inaad maalin uun beer kuu gaar ah yeelato? Midabee beertaada oo ka dhig mid furan!
Talaado, Jan. 12: Aynu Wada Heesno! Ku hees "Maanta Ka dhigista Maalin Fiican" Anna iyo Elsa la hees si aad maanta uga dhigto maalin ku habboon!
Arbaco, Jan. 13: Wax ka baro nafaqada! Waqti aad ku karsatid cunto fudud oo caafimaad leh , subagga looska iyo duubka tufaaxa! Fudud oo fudud!
Khamiis, Jan. 14: Wax ka baro Dunida! Aynu booqanno Ruushka si aan u aadno barafka, daawashada balletka oo aan uga barano dhaqdhaqaaqyada Ballerina, Gabriela!
Jimcaha, Jan. 15: Aan Guurno! Waa waqtigii Yoga! Baro sida loo sameeyo Jiilaalka Wonderland waxay u egtahay garaacis!
Isniinta, Jan. 18: Aan Wax Ka Baranno Cilmiga! Ma rabtaa inaad kula kulanto xilliga qaboobaha Pole North ? Iska hubi!
Talaado, Janaayo 19: Wax ka baro Dunida! Marabtaa inaad wax ka barato taariikhda Vikings? Aynu booqano tuulada Viking ee Iceland!
Arbaco, Jan. 20: Safarka Goob Ficil ahaaneed! Booqo Goldenrust Farm oo u dhow Dover, Minnesota. La kulan beeraleyda Jessica iyo digaageeda, lo'deeda, doofaarradeeda iyo idoheeda!
Khamiis, Jan. 21: Waqtiga Farshaxanka! Waa 2021! Aynu abuurno jadwalka gaarka ah ee Janaayo! Qorshee oo calaamadee maalmo gaar ah sidoo kale!
Jimcaha, Jan. 22: Wax ka baro nafaqada! Aynu isla heesno hees ku saabsan cunista khudaarta!
Isniinta, Jan. 25: Aan Wada Heesno! Alaabta carruurtu ku ciyaaraan ayaa ah saaxiibbada ugu wanaagsan weligood! Ku hees "Waad Saaxiib igu Heshay" Woody oo ka socda Toy Story!
Talaado, Jan. 26: Aan Wax Ka Baranno Cilmiga! La ciyaarista birlabta waxay noqon kartaa wax lagu farxo! Jessi wuxuu ina barayaa sida magnetsku u shaqeeyo!
Arbaco, Jan. 27: Aan Guurno! Ma rabtaa inaad noqoto sida Spiderman oo kale? Raac dhaq dhaqaaqyadan si aad ugu ekeysid Spiderman!
Khamiis, Jan. 28: Wax ka baro nafaqada! Ukunku waa caafimaad qabaan oo dhadhan fiican yihiin! Ukunta xagee ka timid? Aynu ogaanno!
Jimcaha, Jan. 29: Wax ka baro Dunida! Aynu booqano tuulada Renaissance ee qarniyadii dhexe ee Hungary! Daawo video-ga si aad wax uga ogaato dhaqankooda!
Janaayo Hawlaha Kobcinta CACFP
Isniinta, Febraayo 1: Aan Barano Cilmiga! Ma rabtaa inaad ogaato sida loo sameeyo subagga guriga lagu sameeyo? Jessi ayaa ku bari doonta sida loo sameeyo iyo sida ay u shaqeyso!
Talaado, Febraayo 2: Wax ka baro Dunida! Ma rabtaa inaad barato sida loo noqdo Ninja cabsi badan? Booqo dugsiga tababarka Ninja ee Japan oo wax badan ka baro Ninjas!
Arbaco, Febraayo 3: Waqtiga Farshaxanka! Isku xir dhibcaha, iyo midab sawirka qarsoon! Waa tan tilmaam: wuxuu ku duulayaa cirka wuxuuna kuu keenayaa meelo kale iyo dalal kale.
Khamiista, Febraayo 4: Wax ka baro nafaqada! Miraha iyo khudradda waxay ka yimaadaan lix qaybood oo dhir ah. Wax ka baro qaybaha la cuni karo ee miraha iyo khudaarta leh Chart Part Chart!
Jimco, Febraayo 5: Aan Guurno! Waa wakhti qaar ka mid ah Super Yoga! Baro sida loo sameeyo jimicsiga fidinta safaayada leh Jamie iyo dhibcaha dhibcaha!
Isniinta, Febraayo 8: Wax ka baro nafaqada! Ma ogtahay halka ay ka yimaadaan miraha iyo khudradda aad ugu jeceshahay ? Aynu la ogaanno Peter iyo Maria!
Talaado, Febraayo 9: Aan Baranno Sayniska! Waa maxay xilli aad ugu jeceshahay? Akhriso gabayadan quruxda badan xilli kasta oo arag sida adduunku isu beddelo!
Arbaco, Febraayo 10: Aynu Baranno Sayniska! Qaanso-roobeedku waa qurux badan yihiin, laakiin way adag tahay in la helo. Halkan waxaa ah qarsoodi ah inaad sameysid qaansoroobaad u gaar ah gurigaaga! Fiiri sida Jessie u sameeyo!
Khamiista, Febraayo 11: Aan Wada Heesno! Jacayl baa hawada ku jira! Ula dabbaaldeg maalinta Jacaylka qoyskaaga aad jeceshahay kuna hees "Jacaylku waa albaab furan" Anna iyo Hans
Jimco, Febraayo 12: Wax ka baro Dunida! Maanta waa Sannadka Miilaadiga! Aynu booqano Beijing, China aniga iyo Julia iyo Joanna si aan u aragno sida ay u ciidayaan, u sameeyaan laambado ay kula kulmaan qoob ka ciyaarka libaaxa
Isniinta, Febraayo 15: Aan Barano Cilmiga! Weligaa ma isweydiisay sida xayawaanku u ogaadaan jidka loo maro oo ay ku helaan guryahooda? Waxay leeyihiin xoogaa xeelado nadiif ah oo ay ku sameeyaan!
Talaado, Febraayo 16: Wax ka baro nafaqada! Tufaaxu waa miro caafimaad qaba oo loo isticmaalo in lagu sameeyo casiir, cider iyo tufaax. Aynu sameyno cunno fudud oo caafimaad leh oo tufaax ah oo leh tufaax!
Arbaco, Febraayo 17: Safarka Goob Joogtada ah ee Bisha! Booqo Deer Lake Apple Orchard, oo qoysku leeyahay orchard tufaax ah oo ku yaal banaanka Buffalo, Minnesota! Aynu tagno soo qaado tufaaxyada!
Khamiista, Febraayo 18: Wax Ka Baro Dunida! Hindiya waa mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn adduunka! Booqo Taj Mahal oo ku taal Hindiya adoo wata Rosie iyo Julian oo raac raac geel iyada oo loo marayo suuq xiiso leh!
Jimco, Febraayo 19: Aan Guurno! Batman waligiis ma nasto si uu u badbaadiyo Gotham City! Waa kuwan tababarka tababarka qarsoodiga ah! Raac dhaq dhaqaaqiisa oo noqo mid xoogan sida Batman!
Isniinta, Febraayo 22: Waqtiga Farshaxanka! Midab dunidan khiyaaliga ah ee quruxda badan leh Humpty Dumpty, xayawaano qurxoon iyo alaabada miiska. Sidoo kale, ka hel lambarrada qarsoon 1 ilaa 10! Aynu tirinno!
Talaado, Febraayo 23: Aan wada heesano! Dareemo iyo buluug maalmaha qaar ma dareentaa? Mama Odie ayaa kugu farxi doonta heesteeda "Qoto Dheer Qoto Dheer!"
Arbaco, Febraayo 24: Aan Baranno Sayniska! Fiiri fiidiyowgaan oo baro xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan wiyisha!
Khamiista, Febraayo 25: Wax Ka Baro Nafaqada! Ma ogtahay waxa sonkorta ay ku sameyso jirkaaga? Chris ayaa kaaga warrami doona waxa ku saabsan oo dhan iyo waxa dhici doona haddii aad cunto sonkor badan!
Jimco, Febraayo 26: Wax Ka Baro Dunida! Ma garaneysaa farqiga u dhexeeya gorgortanka iyo yaxaasyada? Booqo Florida adiga iyo Jessica iyo Jake si aad u ogaato una aragto alligators badan!
Feebarwari Hawlaha Tayeynta CACFP
Isniinta, Maarso 1: Wax ka baro Dunida! Molly iyo Sam ayaa kugu hagi doona inaad la kulanto muusikiisteyaasha maxalliga ah, baro sida loo farta rinjiga, iyo dhadhanka dhagaha iyo furitaanka piñata ee Mexico!
Talaado, Maarso 2: Aynu Baranno Sayniska! Qorraxdu waa isha muhiimka u ah tamarta. Jessi iyo Squeaks waxay isticmaali doonaan awooda qorraxda si ay u yeeshaan tijaabo saynis qabow!
Arbaco, Maarso 3: Wax ka baro nafaqada! Ma xiiseyneysaa waxa ku saabsan noocyada fiitamiinnada iyo macdanta midho kasta ay leedahay? Raadi wax badan oo ku saabsan xaqiiqooyinka xiisaha leh ee ku saabsan miraha kala duwan!
Khamiista, Maarso 4: Waqtiga Farshaxanka! Waa midab baabuur tartan lambar ah! Midab u yeelo qayb kasta sida ay tirooyinka u yihiin. Dhawaan waxay soo bandhigi doontaa gaari cusub oo cabsi badan!
Jimcaha, Maarso 5: Aan Baranno Sayniska! Cimiladu way sii kululaaneysaa!
Mya ayaa ku bari doonta sida loogu sameeyo heerkulbeeggaaga gurigaaga midabka aad ugu jeceshahay!
Isniinta, Maarso 8: Wax ka baro nafaqada! Ma jeceshahay biyo cabid?
Peter wuxuu Maria u sheegayaa dhammaan xaqiiqooyinka biyaha ee cajiibka ah, iyo sababta ay muhiim u tahay in biyo la cabbo!
Talaado, Maarso 9: Aan Wada Heesno! Ma jeceshahay inaad cuntid khudradda? Waa caadi! Ku hees heestaan waxaadna bilaabi doontaa inaad jeceshahay cunista khudaarta! Waa wax xiiso leh in la cuno khudradda!
Arbaco, Maarso 10: Wax ka baro Dunida! Weligaa ma aragtay hoonbar casaan ah? Jessica iyo Jake waxay aadi doonaan wabiga Amazon ee dalka Brazil si ay ula dabaashaan dolphinska pink-ka!
Khamiista, Maarso 11: Aan Baranno Sayniska! Ma jeceshahay inaad uruuriso dinaar? Jessi wuu ogyahay khiyaamo saynis dhab ah oo qabow si uu u nadiifiyo dinaarradii hore ugana dhigo sidii mid cusub!
Jimco, Maarso 12: Aan Guurno! Maxaan jimicsi u sameynaa? Peter wuxuu u sheegi doonaa Chris inuu sheego sababta jimicsigu muhiim u yahay. Waxay noqon kartaa mid fudud oo baashaal leh
Isniinta, Maarso 15: Wax ka baro Dunida! Weligaa ma aragtay dixiryo dhalaalaya? Raac TJ iyo Tristan ilaa New Zealand. Labadiinaba wada raac godadka mugdiga ah soona ogaada!
Talaado, Maarso 16: Aan Baranno Sayniska! Libaaxyadu waa xayawaan la yaab leh, way xoog badan yihiin oo dhaqso badan yihiin! Soo ogow qaar ka mid ah xaqiiqooyinka qabow ee ku saabsan halka ay ku nool yihiin iyo caadooyinka maalinlaha ah!
Arbaco, Maarso 17: Aynu Wada Heesno! Miyaad leedahay ilig qulqulaya oo aad ka baqaysaa inaad u tagto dhakhtarka ilkaha? Ha welwelin. Heesta Wobbly Tooth Song ayaa kaa caawin doonta inaad tan si wada jir ah ugu gudubto!
Khamiista, Maarso 18: Waqtiga Farshaxanka! Kaamku waa wax lagu farxo, oo lagu seexdo teendho, marshmallows, iyo xerada dabka! Aynu tagno kaambada oo aan midabeyno macmacaan kaambeyn macaan!
Jimcaha, Maarso 19: Aan Baranno Sayniska! Ma jeceshahay rinjiyeynta laakiin waad ka dhammaatay? Ha welwelin. Jessi iyo Squeaks ayaa ku bari doona sida loo sameeyo midabada biyahaaga gurigaaga dhexdiisa!
Isniinta, Maarso 22: Wax ka baro nafaqada! Bishii la soo dhaafay, waxaan baranay waxa dhaca haddii aan cunno sonkor badan. Maria waxay ku bari doontaa inta sonkorta ku jirta soodhada!
Talaado, Maarso 23: Aan Wada Heesno! Ma jeceshahay cunto karinta Dhageyso oo hees ku qaad heesta wax karinta si aad u barato sida wax loo kariyo ee badbaadada iyo xiisaha leh! Dhawaan waxaad noqon doontaa khabiir!
Arbaco, Maarso 24: Safarka Goob Joogtada ah ee Bisha! Booqo Goldenrust Farm oo u dhow Dover, Minnesota. La kulan beeraleyda Jessica iyo digaageeda, lo'deeda, doofaarradeeda, iyo idoheeda !!
Khamiista, Maarso 25: Wax ka baro nafaqada! Superfood u samatabbixinta! Waxaad wax badan ka qaban kartaa bocorka ka badan Halloween iyo Thanksgiving. Waxay yihiin dhadhan fiican, iyo cunto adiga kuu ah!
Jimcaha, Maarso 26: Aan Guurno! Ma ogtahay in neefsashadu sidoo kale ay tahay mid ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee jimicsiga? Dee iyo asxaabteeda ayaa ku bari doona sida loo neefsado si ay kaaga caawiso inaad nasato!
Isniinta, Maarso 29: Wax ka baro Dunida! Maanta, Hindiya waxay u dabaaldegtaa xaflad midab leh, Holi! Aan tagno Hindiya, booqo Macbadka Lotus Blossom, oo aan ku raaxeysano Holi oo leh qoob ka ciyaarka Holi!
Talaado, Maarso 30: Aan Baranno Sayniska! Bisaduhu waa xayawaanka la jecel yahay! Iyagu waa quruxsan yihiin, laakiin sidoo kale qarsoodi ah. Raadi wax badan oo ku saabsan xaqiiqooyinka xiisaha leh ee ku saabsan bisadaha iyo dhaqankooda!
Arbaco, Maarso 31: Waqtiga Farshaxanka! Waa maxay xilli aad ugu jeceshahay? Qor magaca xilli kasta oo midabee afarta xilliba! Waad ka dhigi kartaa meel xayeysiis ah sidoo kale!
Maarso Hawlaha Kobcinta CACFP
Adeegyada Nafaqada ee Robbinsdale waxay si adag uga shaqeynayeen inay la yimaadaan habab cusub oo casriyeysan. Waxaan si adag u aaminsanahay qaababka cunida caafimaadka leh inay muhiim u yihiin ardayda inay ku fiicnaadaan iskuulka, kuna raaxeystaan waqtiga ay la qaataan asxaabtooda iyo qoyskooda, iyo inay si buuxda u horumariyaan maskax ahaan iyo jir ahaanba. Intaa waxaa sii dheer, caadooyinkan ayaa lala xiriiriyay hoos u dhigista halista dhimashada iyo ka hortagga cudurrada joogtada ah ee mustaqbalka.
Adeegyada Nafaqada ee Robbinsdale cuntooyinka qadada waxay siinayaan carruurta noocyo kala duwan oo cuntooyin nafaqo leh oo macaan leh. Karinta karinta cusub waa nashaadaad iyo mashquul xiiso leh oo guriga loogu raaxeysan karo!
Kibista rootiga rootiga ee faransiiska (PDF)
Kiriim broccoli tufaa slaw (PDF)
Honey sriracha dubay squash squash (PDF)
Karootada la dubay oo la kariyey oo leh maraqa sriracha mayo (PDF)
Burush la dubay ayaa ku soo baxay malab iyo dill (PDF)
Karootada subagga malab dubay (PDF)
Baradho macaan oo basbaas leh (PDF)